एनआरएन – Page3– Lokpati.com
राशिफल प्रधानमन्त्री चितवन नेकपा प्रचण्ड नेपाल प्रहरी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड पक्राउ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अमेरिका नेपाली काँग्रेस केपी शर्मा ओली अपराध सरकार मृत्यु
‘नेपाल निर्माण गर्ने महाअभियानमा लगानी गरौं’
काठमाडौं, २८ असोज। राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन्। आजबाट काठमाडौंमा सुरु भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नवौं विश्व सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै व्यक्तिगत तथा सामूहिक लगानी…
विश्व सम्मेलन : ‘एनआरएनलाई नेपाल दूत बनाऔं’
उम्मेदवार आवेदन फर्म लिँदा नै दश लाखसम्म चाहिने जुन अवस्था छ, त्यसले यो कतै पैसाको प्रर्दशन गर्ने धनाढ्य क्लब त होइन ? भन्ने प्रश्न गम्भिर रुपमा उठेको छ। एकातर्फ मध्यपूर्वमा बस्ने नेपालीलाई समेत एनआरएनए भनिएको छ। अर्कातर्फ दश लाखको डण्डाले…
नवौं गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलन भोलिबाट
काठमाडौं । नवौं गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा हुने भएको छ । भोलिबाट सुरु हुने सम्मेलन शुक्रबार सम्म चल्नेछ । विदेशमा छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई संघको सञ्जालमा गोलबन्द गर्दै नेपालीका लागि…
एनआरएनए महाधिवेशन : युवा व्यवसायी गुरुङको चुनावी अभियान तीव्र
काठमाडौं, २६ असोज। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को मध्यपूर्व क्षेत्रीय संयोजक पदमा उम्मेदवारी दिएका युवा व्यवसायी प्रविन गुरुङको चुनावी प्रचारप्रसार तात्तै गएको छ। मध्यपूर्वका सबै मुलुकहरुमा आफैँ पुगेर त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको समस्याहरु…
यस्ता छन् एनआरएन उपाध्यक्षका उम्मेद्वार अर्जुन श्रेष्ठका एजेण्डा
काठमाडौं, १० असोज । गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए, आइसिसी) को उपाध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेका पूर्वसचिव अर्जुनकुमार श्रेष्ठले आफ्नो एजेणसमेत सार्वजनिक गरेका छन्। श्रेष्ठले विज्ञप्ती जारी गर्दै २०१९–२१…
काठमाडौं। सानिमा बैंकले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) हरुका लागि सानिमा एनआरएन मुद्दती खाता ल्याएको छ। बैंकका अनुसार यो खाता गैरआवासीय नेपालीहरुले अमेरिकी डलर वा पाउण्ड स्टर्लिङ वा यूरो मुद्रामा खोल्न सक्छन्। विदेशमा कमाएको पैसा नेपालमा…
काठमाडौं, २४ भदौ। गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएन) को अध्यक्ष पदको उम्मेदवारीका लागि रु. १० लाख शूल्क तोकिएको छ। संघको नवौं सम्मेलनमा उम्मेदवार हुनका लागि विभिन्न पदका लागि शूल्क निर्धारण गरिएको छ। संघ नवौ विश्व सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा छ।…
एनआरएन उपाध्यक्षमा धर्मराज अधिकारीद्वारा उम्मेदवारी घोषणा
अस्ट्रेलिया, ६ भदाै‌ । आगामी अक्टोबर १५ देखि १७ सम्म काठमाडौंमा हुन लागेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनअराएन) को विश्व सम्मेलनमा वर्तमान ओसेनिया क्षेत्रीय संयोजक धर्मराज अधिकारीले उम्मेदवारी दिने भएका छन् । नुवाकोटको तारुकामा जन्मिएर लामो…
काठमाडाैं । गोरखाको फुजेलमा सामान्य परवारमा सन् १९७६ मा जन्मिनुभएका कुमार पन्त तिक्ष्ण बुद्धि, शालीन तथा आज्ञाकारी बालब्यक्तित्व उहाँको असल परिचय थियो । अवसरको खोजीमा सपनाको सानो पोको बोकि सन्र १९९७ तिर जर्मन छिरेर जिवन एक संघर्ष हो भन्ने…
काठमाडाैं, १० साउन । संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुकाे साझा संगठन एनआरएनएकाे निर्वाचन विभिन्न देशमा भइरहेकाे छ । यसै क्रममा अस्ट्रियामा पनि हालै निर्वाचन सम्पन्न भएकाे छ । एनआरएनए संसारमा छरिएर रहेका ५० लाख भन्दा बढी नेपालीहरुको साझा संगठन…